ကလေးများ PRETEND သည်ကစားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောသင်္ချာများကိုကစားခြင်း - ကစားခြင်းနှင့်ကောင်းသည် subtitles October 21, 2020
ကလေးများ PRETEND သည်ကစားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောသင်္ချာများကိုကစားခြင်း - ကစားခြင်းနှင့်ကောင်းသည် subtitles
shakuntala devi ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မင်းဘာလို့အရမ်းဝမ်းနည်းတာလဲ ငါဥတွေရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ။ ဒါဆိုသူမမှာဥကိုဘာဖြစ်လို့ရတာလဲ၊ ပြီးတော့မင်းကဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းသိလိမ့်မယ် သူမဘာကြောင့်စားပွဲခုံတွေထိုင်နေရတာလဲသိလားမင်းကဗီဒီယိုကြည့်တာအကုန်အထိသိမှာပေါ့ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျပြီးမျှဝေပါ၊ Toystars channel ကို subscribe လုပ်ပါ အိုးဒီတာရာ၊ ငါဒီသင်္ချာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး၊ Khichdi မစားနိုင်သောစိတ်တစ်ခု khichdi မဟုတ်သောကြောင့်လေ့လာပါ ဒီ shakuntala က devi ဘယ်လောက်လဲ mam maths, ဒါဆိုမင်းရဲ့မိတ္တူတွေဘယ်မှာလဲ။ အိတ်ထဲမှာ mam, ဒါကြောင့်ဆိအိတ်၌စောင့်ရှောက်သောအထဲကထုတ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ ဒါကိုမြန်မြန်ထုတ်ယူပါ၊ ကောင်းသောကောင်လေး၊ ကောင်လေးကောင်း၊ ကလေးများ၊ ဒီတော့ဒီနေ့ငါတို့မြှောက်ခြင်းကိုလေ့လာကြမယ်။ ဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲ ငါနင့်ကိုသိပေမယ့်နားမလည်ဘူး Mam ဘယ်လိုဒီ 35 သို့ရောက်လာ? ကမြှောက်ပြီးနောက်လာနှင့်မည်သို့အခြားပြုသောအမှုဖွင့် !! ၁၅၊ အဖြေကဘယ်လောက် ၁၅ လဲ။ mam နောက်တဖန်ငါသံသယရှိသည်, ငါတို့မြှောက်ရိုးရှင်းသောလုပ်ခဲ့တယ် shakuntala, သင်များပြားကြဘူး သင့်မှာသံသယရှိနေရင်ကလေးတွေကမေးပါလိမ့်မယ် Mam ရဲ့အဖြေက ၈ ဖြစ်မယ်။ တစ်ခုခုကိုရှာကြည့်ပါ ဦး ။ ဘယ်လိုရောက်လာခဲ့သလဲ။ များများလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ဘယ်သူ့ကိုအလွတ်ကျက်နေလဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှမေးနေတယ်၊ ​​မင်းမှာသံသယရှိတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေတောင်းကြတယ် သူမပြောတာကမင်းမှာမင်းမှာသံသယတစ်ခုရှိရင်မင်းကိုမေးလို့ရတယ်၊ သင်္ချာကမပါရှိရင်တိုတာသိုးထီးကဘယ်လောက်ပျော်စရာလဲ။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေး၊ ယနေ့ကလေးတွေအံ့အားသင့်စရာပါ၊ အံ့အားသင့်စရာပါ။ သငျသညျသင်္ချာသင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်လော အံ့အားသင့်စရာစမ်းသပ်မှုမိတ္တူထုတ်ယူပါ ကလေးများသည်စာရေးခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင်၏အဖြေစာရွက်ကိုတင်ပြပါ Shakuntala devi ကျေးဇူးပြု၍ ဒီမှာလာပါ၊ ဟုတ်ကဲ့မေမေများများထပ်ဖြည့်တာမလုပ်သင့်ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပါ ငါသင်္ချာကိုနားလည်တဲ့အခါနံပါတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ wow tota ram ရဲ့မိတ္တူကိုစစ်ဆေးရင်း wow အရမ်းခံစားရတယ် ဟုတ်ကဲ့မေမေအရမ်းကောင်းတဲ့သားလေးကိုဆက်လုပ်ပါ ငါကြယ်ပွင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ၊ ငါမင်းလိုအလွတ်ကျက်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီသင်္ချာတွေနဲ့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ် shakuntala devi ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မင်းဘာလို့အရမ်းဝမ်းနည်းတာလဲ ငါဥတယ် ထို tota သိုးသည်အမှတ်အသားအပြည့်အစုံရရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်သုညမရှိ။ တစ်နေ့တွင်သူသည်အမှတ်ရကောင်းရလိမ့်မည် ထိုအခါအတူတူပင်လမ်းအတွက်နေ့စဉ် shakuntala သုညရနှင့် tota သိုးထီးကိုအစဉ်အမြဲအလွတ်ကျက်ခြင်းအားဖြင့်လွန် လများစွာကုန်လွန်သွားသော်လည်းသင်သင်္ချာကိုနားမလည်ခဲ့ပါ၊ ကောင်းသောနံနက်ခင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာ၊ အမေကကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကိုအမြဲတမ်းဆူဆူညံညံသင်ပေးဖို့လိုတယ်၊ ဤအရာမှချန်ထားပါ၊ သင်္ချာပြိုင်ဆိုင်မှုသည်နောက်အပတ်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကလေးများသည်ပါ ၀ င်မှုများကိုပြုလုပ်ကြပြီး၊ ငါပါ ၀ င်ပြီးပထမဆုကိုရမယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ဆုကိုငါရမယ် သင်္ချာမှာသင်အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘာမှမသိဘူး။ အဲဒီအချိန် ok ပြောပြလိမ့်မယ် အခုဘာဖြစ်တာလဲ ပြိုင်ပွဲမှာငါပါ ၀ င်ခဲ့ပေမဲ့ငါဘာမှမသိဘူး၊ မင်းရဲ့သင်္ချာတွေကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာလုပ်လိမ့်မယ် ဒါကြောင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြုရလိမ့်မည်ဟု halwa လား !! ယခုတွင်သင်သည်သင်ယူခြင်းနှင့်အတူပျော်စရာလုပ်ပါလိမ့်မယ် သင်တို့အတွက်အမြောက်အများသုံးစက်ကိုသုံးသည်။ သို့သော်အစ်မက၎င်းကိုမသုံးမီကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရန်လိုသည် ယခုငါတို့စက်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ယခုသင်ဤစက်မှကောင်းစွာသင်ပွားလာပါလိမ့်မည် 10 * 8 ဆိုတာဘာလဲ? 10 * 8 သည် 80, 12 * 11 = 132 ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းသော shakuntala သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Mam, ငါ့စမ်းသပ်မှုပြု, ဒါအစာရှောင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့ကလေးတွေသင်္ချာရဲ့ရလဒ်ရောက်လာတယ်၊ ဒီတော့ဘယ်သူကဒီပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရတာလဲ။ သူအနိုင်ရပါဘူး tota သိုးထီး ဤအချိန် shakuntala devi အနိုင်ရရှိ wak shakuntala ကလေး၊ မင်းရဲ့အဖြေအားလုံးဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဆရာမငါပြောလိမ့်မယ်, ထိုမိုက်ကယ်ထားခဲ့ပါ အကြှနျုပျ၏အားလုံးသဘောတရားများကိုကောင်းစွာကောင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတယ် .. ဆရာ။ ငါတစ်ခုခုပြောချင်တယ် ဒီတော့အမှားအားလုံးဟာငါ့အမှားပဲ။ မင်းပဲငါတို့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘဲအလွတ်ကျက်တယ် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ အမှားတွေလုပ်မိတယ်၊ မင်းဟာနှုတ်ခမ်းမွှေးလေးတွေကိုပေးပြီးကလေးကိုပေးတာလား ဒီတော့ငါတို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးရဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုလဲ။ အလွတ်ကျက်မှတ်သကဲ့သို့အလွတ်ကျက်ဖြစ်ပျက်ဘာမျှမဖြစ် ဒါကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသာပြုလုပ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဂရုစိုက်ပြီးမြန်ဆန်စွာစောင့်ရှောက်နိုင်မယ့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာသင့်ကိုတွေ့မှာပါ
ကလေးများ PRETEND သည်ကစားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောသင်္ချာများကိုကစားခြင်း - ကစားခြင်းနှင့်ကောင်းသည်
<text sub="clublinks" start="1.831" dur="3.169">shakuntala devi ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မင်းဘာလို့အရမ်းဝမ်းနည်းတာလဲ</text>
<text sub="clublinks" start="7.658" dur="6.778"> ငါဥတွေရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ။ ဒါဆိုသူမမှာဥကိုဘာဖြစ်လို့ရတာလဲ၊ ပြီးတော့မင်းကဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းသိလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="17.412" dur="6.191"> သူမဘာကြောင့်စားပွဲခုံတွေထိုင်နေရတာလဲသိလားမင်းကဗီဒီယိုကြည့်တာအကုန်အထိသိမှာပေါ့</text>
<text sub="clublinks" start="23.999" dur="6.776"> ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျပြီးမျှဝေပါ၊ Toystars channel ကို subscribe လုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="39.049" dur="8.249"> အိုးဒီတာရာ၊ ငါဒီသင်္ချာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး၊</text>
<text sub="clublinks" start="47.525" dur="7.351"> Khichdi မစားနိုင်သောစိတ်တစ်ခု khichdi မဟုတ်သောကြောင့်လေ့လာပါ</text>
<text sub="clublinks" start="63.838" dur="10.705"> ဒီ shakuntala က devi ဘယ်လောက်လဲ mam maths, ဒါဆိုမင်းရဲ့မိတ္တူတွေဘယ်မှာလဲ။ အိတ်ထဲမှာ mam, ဒါကြောင့်ဆိအိတ်၌စောင့်ရှောက်သောအထဲကထုတ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="74.732" dur="12.051"> ဒါကိုမြန်မြန်ထုတ်ယူပါ၊ ကောင်းသောကောင်လေး၊ ကောင်လေးကောင်း၊ ကလေးများ၊ ဒီတော့ဒီနေ့ငါတို့မြှောက်ခြင်းကိုလေ့လာကြမယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="86.783" dur="5.134"> ဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲ ငါနင့်ကိုသိပေမယ့်နားမလည်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="99.235" dur="5.725"> Mam ဘယ်လိုဒီ 35 သို့ရောက်လာ? ကမြှောက်ပြီးနောက်လာနှင့်မည်သို့အခြားပြုသောအမှုဖွင့် !!</text>
<text sub="clublinks" start="110.525" dur="11.553"> ၁၅၊ အဖြေကဘယ်လောက် ၁၅ လဲ။ mam နောက်တဖန်ငါသံသယရှိသည်, ငါတို့မြှောက်ရိုးရှင်းသောလုပ်ခဲ့တယ် shakuntala, သင်များပြားကြဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="123.135" dur="2.661"> သင့်မှာသံသယရှိနေရင်ကလေးတွေကမေးပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="129.736" dur="7.267"> Mam ရဲ့အဖြေက ၈ ဖြစ်မယ်။ တစ်ခုခုကိုရှာကြည့်ပါ ဦး ။</text>
<text sub="clublinks" start="137.173" dur="8.667"> ဘယ်လိုရောက်လာခဲ့သလဲ။ များများလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ဘယ်သူ့ကိုအလွတ်ကျက်နေလဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှမေးနေတယ်၊ ​​မင်းမှာသံသယရှိတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေတောင်းကြတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="146.255" dur="5.209"> သူမပြောတာကမင်းမှာမင်းမှာသံသယတစ်ခုရှိရင်မင်းကိုမေးလို့ရတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="156.581" dur="5.488"> သင်္ချာကမပါရှိရင်တိုတာသိုးထီးကဘယ်လောက်ပျော်စရာလဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="166.725" dur="11.776"> မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေး၊ ယနေ့ကလေးတွေအံ့အားသင့်စရာပါ၊ အံ့အားသင့်စရာပါ။ သငျသညျသင်္ချာသင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်လော အံ့အားသင့်စရာစမ်းသပ်မှုမိတ္တူထုတ်ယူပါ</text>
<text sub="clublinks" start="200.127" dur="4.115"> ကလေးများသည်စာရေးခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင်၏အဖြေစာရွက်ကိုတင်ပြပါ</text>
<text sub="clublinks" start="208.984" dur="6.956"> Shakuntala devi ကျေးဇူးပြု၍ ဒီမှာလာပါ၊ ဟုတ်ကဲ့မေမေများများထပ်ဖြည့်တာမလုပ်သင့်ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="217.907" dur="10.251"> ငါသင်္ချာကိုနားလည်တဲ့အခါနံပါတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ wow tota ram ရဲ့မိတ္တူကိုစစ်ဆေးရင်း wow အရမ်းခံစားရတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="228.649" dur="5.096"> ဟုတ်ကဲ့မေမေအရမ်းကောင်းတဲ့သားလေးကိုဆက်လုပ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="235.519" dur="8.229"> ငါကြယ်ပွင့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ၊ ငါမင်းလိုအလွတ်ကျက်ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီသင်္ချာတွေနဲ့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="247.163" dur="7.837"> shakuntala devi ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မင်းဘာလို့အရမ်းဝမ်းနည်းတာလဲ ငါဥတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="255.415" dur="8.783"> ထို tota သိုးသည်အမှတ်အသားအပြည့်အစုံရရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်သုညမရှိ။ တစ်နေ့တွင်သူသည်အမှတ်ရကောင်းရလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="269.405" dur="8.004"> ထိုအခါအတူတူပင်လမ်းအတွက်နေ့စဉ် shakuntala သုညရနှင့် tota သိုးထီးကိုအစဉ်အမြဲအလွတ်ကျက်ခြင်းအားဖြင့်လွန်</text>
<text sub="clublinks" start="279.393" dur="8.874"> လများစွာကုန်လွန်သွားသော်လည်းသင်သင်္ချာကိုနားမလည်ခဲ့ပါ၊</text>
<text sub="clublinks" start="292.391" dur="6.89"> ကောင်းသောနံနက်ခင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာ၊ အမေကကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကိုအမြဲတမ်းဆူဆူညံညံသင်ပေးဖို့လိုတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="300.771" dur="7.229"> ဤအရာမှချန်ထားပါ၊ သင်္ချာပြိုင်ဆိုင်မှုသည်နောက်အပတ်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကလေးများသည်ပါ ၀ င်မှုများကိုပြုလုပ်ကြပြီး၊</text>
<text sub="clublinks" start="308.283" dur="10.628"> ငါပါ ၀ င်ပြီးပထမဆုကိုရမယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ဆုကိုငါရမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="319.156" dur="5.757"> သင်္ချာမှာသင်အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘာမှမသိဘူး။ အဲဒီအချိန် ok ပြောပြလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="329.562" dur="9.48"> အခုဘာဖြစ်တာလဲ ပြိုင်ပွဲမှာငါပါ ၀ င်ခဲ့ပေမဲ့ငါဘာမှမသိဘူး၊ မင်းရဲ့သင်္ချာတွေကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာလုပ်လိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="339.174" dur="5.16"> ဒါကြောင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြုရလိမ့်မည်ဟု halwa လား !! ယခုတွင်သင်သည်သင်ယူခြင်းနှင့်အတူပျော်စရာလုပ်ပါလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="345.334" dur="11.459"> သင်တို့အတွက်အမြောက်အများသုံးစက်ကိုသုံးသည်။ သို့သော်အစ်မက၎င်းကိုမသုံးမီကျွန်ုပ်တို့ထည့်ရန်လိုသည်</text>
<text sub="clublinks" start="365.318" dur="7.721"> ယခုငါတို့စက်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ယခုသင်ဤစက်မှကောင်းစွာသင်ပွားလာပါလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="384.457" dur="13.937"> 10 * 8 ဆိုတာဘာလဲ? 10 * 8 သည် 80, 12 * 11 = 132 ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းသော shakuntala သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="414.428" dur="4.559"> Mam, ငါ့စမ်းသပ်မှုပြု, ဒါအစာရှောင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့</text>
<text sub="clublinks" start="420.428" dur="10.727"> ဒီတော့ကလေးတွေသင်္ချာရဲ့ရလဒ်ရောက်လာတယ်၊ ဒီတော့ဘယ်သူကဒီပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရတာလဲ။ သူအနိုင်ရပါဘူး tota သိုးထီး</text>
<text sub="clublinks" start="433.47" dur="4.905"> ဤအချိန် shakuntala devi အနိုင်ရရှိ</text>
<text sub="clublinks" start="443.676" dur="7.758"> wak shakuntala ကလေး၊ မင်းရဲ့အဖြေအားလုံးဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဆရာမငါပြောလိမ့်မယ်, ထိုမိုက်ကယ်ထားခဲ့ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="452.435" dur="6.4"> အကြှနျုပျ၏အားလုံးသဘောတရားများကိုကောင်းစွာကောင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတယ် .. ဆရာ။ ငါတစ်ခုခုပြောချင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="462.706" dur="10.005"> ဒီတော့အမှားအားလုံးဟာငါ့အမှားပဲ။ မင်းပဲငါတို့ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘဲအလွတ်ကျက်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="473.202" dur="5.007"> စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ အမှားတွေလုပ်မိတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="479.286" dur="4.02"> မင်းဟာနှုတ်ခမ်းမွှေးလေးတွေကိုပေးပြီးကလေးကိုပေးတာလား</text>
<text sub="clublinks" start="492.436" dur="8.701"> ဒီတော့ငါတို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးရဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်လိုလဲ။ အလွတ်ကျက်မှတ်သကဲ့သို့အလွတ်ကျက်ဖြစ်ပျက်ဘာမျှမဖြစ်</text>
<text sub="clublinks" start="501.326" dur="6.342"> ဒါကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုသာပြုလုပ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဂရုစိုက်ပြီးမြန်ဆန်စွာစောင့်ရှောက်နိုင်မယ့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာသင့်ကိုတွေ့မှာပါ</text>